Siyaasi Cabdikariim Axmed Mooge Oo Ka Digay Boob Lagu Hayo Dhulka Madaarka Hargeysa Iyo Dekeda Berbera |
Siyaasi Cabdikariim Axmed Mooge Oo Ka Digay Boob Lagu Hayo Dhulka Madaarka Hargeysa Iyo Dekeda Berbera
Hargeisa(GNN):-wasiir ku xigeenkii hore ee wasaarada qorshaynta somaliland siyaasi Cabdikariim Axmed Mooge ayaa ka hadlay mustaqbalka uu 10 sano ka dib yeelan doono madaarka caasimada Hargeysa.
Siyaasi Cabdikariim Axmed Mooge ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook waxa uu si si weyn uga digay in la qaybsado dhulka madaarka, waxaanu sheegay inuu wasiirka hawlaha guud la qabo walaaca ku saabsan mustaqbalka dhulka madaarka.
Ugu siyaasi Cabdikariim oo soo xiganaya wasiirka hawlaha guud ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Dhiilada iyo walaaca uu wasiir uu Cali Mareexaan ka qabo mustaqbalka airportka Hargeysa, ayaan la qabaa horena u qabay!! Wasiirku wuxuu yidhi hadal marka aad dhuuxdo macno
durugsan oo sawiraya mustaqbalka Airportka Hargeysa! Wasiirka hadaladiisi waxa ka mid ahaa ee bal shacabyahow dhuuxa
10 sano ka dib Airportka Hargeisa wuxuu u baahanayaa run wayo kale, wuxuu u baahanayaa parking, wuxuu u baahanayaa tax-wayo faro badan Hargeysa oo dhamina waxay doonaysaa dhulkii Airporka Hargeysa!! xafiiskayga SULDAAN, SIYAASI, MADAX, XISBI wada file bay sitaan dhulka Airportka Hargeysa ayuu doonayaa!!! Afka wanaagsan ee Airportka Hargeysa in uu noqdo Airport caalami ah iyo sida magaaladu u doonayso waa kala jaad! Ee ama Airportka qaybsada oo baloodh baloodh u soo doonta ama aan Airportka lagu naloonayno ee 10 sano ka dib noqonayaa international hubka ay diyaaradahu calaamku isagu yimadaan kaa aan ku wada-dagaalano oo ku wada-mititno! Halkaas waxaanu isku fardhinaa Hargeysa oo Airporkii doonaysa ana halkaas baan la fadhiya oo waxaan leeyahay i dhaafimayso, Markaa Hargeysaay war ii keena halkaas baan idiinku sugayaa!!.”
Siyaasi Cabdkariim Axmed Mooge oo hadalkiisa sii wata ayaa ka waramay qorshe lagu bixinayey dhulka madaarka oo uu ka digay waxaanu yidhi “Xiligii aan ka tirsanaa xukumada ayaan ku taliyay in aan dhulka u dhaw afaafka airportka iyo dhulkii u dhawaa Gas-Mta in aan laga duwin taarka oo la soo xidho, aniga oo ku doodayay in Airtportku dhul u baahandoono uu ku fido mustaqbalka si loo casriyeyo. Rag ogaa waxaanan ogeyn ayaa gashaanka u daruuray soo jeedintaydii waana laga duway dhulkaas taarkii ama xayndaabkii Airportka, Mudo yar ka dibna waxa digreeto madaxweyne lagu bixiyay dhamaan dhulkii laga duway taarka Airportka. waxaan maqli jiray “miskiin baa misgo la fuulo leh” waxaan uga socda dadkii saboolka ahaa ee lahaa dhulkana waa laga raray Airportka dhexdiisa hadana isla dhulkii baa rag doonayaa waa sida wasiirku cadeeye!! Waar meeshan Somaliland maxaa cadaalad daro taala!!
Wasiir Cali ayaa ii markhaati furay maanta in Airportka Hargeysa 10 sano ka dib uu u baahandoono dhul weyn oo ku fido wasiirka waa runtii ee mee dhulkaasi? Marka dhulkaa uu airtportku u bahanyahay la waayo maxa la yeeli doona? Waa tilmaan la dahoo degdeg kuma haboone adoo degan u fiirso ujeedada i deeqsi!!!
Sidoo kale siyaasi Cabdikariim Axmed Mooge ayaa sheegay in la boobay dhulkii dekeda Berbera waxaanu yidhi “Dekadii Berbarana waad ogtihiin in dhulkeedi la boobay, Airportka Hargeysana waa taa dhiiladu inaga soo gaadhaysa Wasiirkii Hawlaha Guud ee ma sidan ayaa dawladnimo lagu hantaa reer Somaliland? waxaan maqli jiray hees adeerkay qaadi jiray Alle haw naxariistee oo odhan jirtay Xero bahal ku jiro xoolo kuma dhaqmaan ilayn waa maanta oo kale!!!